Kungani Usikhetha | Xiamen Yasin Imboni kanye Trade Co., Ltd.
1. High Quality Direct Ukwakha
Isipiliyoni seminyaka engama-34 sigxile ekukhiqizeni i-gelatin yokusetshenziswa kwemithi futhi isetshenziselwa kakhulu i-capsule ethambile, igobolondo le-capsule elukhuni, ithebhulethi kanye ne-micro-capsule.neminyaka engaphezu kwengu-10 ku-shell ye-capsule engenalutho ne-collagen line. Ukuphathwa okubonwe kusengaphambili, insika enkulu yesayensi, isisebenzi sokukhiqiza esinekhono eliphelele, iqembu lokuthengisa elithembekile nelikhuthele, kanye nokulawulwa kwekhwalithi ngokuqinile.
2.Ukunikeza Isixazululo Sonke Nokusekelwa Kwezobuchwepheshe
Ukusekelwa kobuchwepheshe kuyatholakala. Singumsebenzi ekukhiqizeni i-capsule ethambile noma i-capsule enzima engenalutho noma ibhere le-gummy lapho sisebenzisa i-gelatin yethu;
3. Ukukhiqiza okuphezulu
I-capsule eningi ingakhiqizwa ngokusebenzisa ama-kgs afanayo e-gelatin avela kithi kunabanye abahlinzeki.
4. Isitoreji Esihleliwe
Sinamandla esitoreji esanele ukugcina uhlu olwenele lokuthola ukulethwa okusheshayo.
5. Umugqa Ojwayelekile Wokukhiqiza we-GMP
Silandela ngokuqinile indinganiso ye-GMP kulayini wethu wokukhiqiza onabanikazi abayi-100,000 bezindlu ezihlanzekile. ngakho-ke kungaqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu ingakhiqizwa endaweni ehlanzekile futhi ezenzakalelayo ezungezile.
7. Ukuvikelwa Kwemvelo Okunobungani
Ukuvikelwa kwemvelo kuwumthwalo wesilisa wonke. Sisungule uhlelo oluphelele lokuphathwa kwendle lokuvikela indle ukuze sigcine indlela esimeme ne-Eco-friendly.
Isevisi esebenza kahle kakhulu
Abamele bethu bokuthengisa bazinikezele ekuhlinzekeni insizakalo kumakhasimende ethu. Hlela ama-oda nokuthunyelwa ngezicelo zamakhasimende ngesikhathi, ngokusho kwenqubomgomo yokuthekelisa yamazwe ahlukene inikezela ngemibhalo ephelele yokuvunyelwa kwamasiko. Sizimisele futhi siyakwazi ukwenza enye imayela ukudlula okulindelwe ngamakhasimende ethu.
9. Isixazululo Sezimali Esiguquguqukayo
I-T / T noma i-L / C iyamukeleka, ama-that wokukhokha we-othat nawo angaxoxwa ngokuya ngemfuno yamakhasimende.